कम्मर दुखाइबाट कसरी बच्ने ? « Himal Post | Online News Revolution
कम्मर दुखाइबाट कसरी बच्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २५ असार १६:५१
कम्मर दुखाइ(व्याक पेन) संसारमै सामान्य रुपमा देखिने दुखाइ मध्ये प्रमुख समस्या हो । हरेक मानिसलाई जीवनमा एक पटक कम्मर दुखाई हुने गरेको पाइन्छ ।
कम्मर दुखाई हुने मुख्य कारण हाम्रो बस्ने तरिका नमिलेर नै हो । घर तथा अफिसमा बसेर काम गर्दा तरिका नमिलेर समस्या सुरु हुन्छ । यसको साथै मोटोपना तथा उमेरका कारण पनि दुखाइ हुन्छ । जसलाई मेकानिकल व्याक पेन भनिन्छ । कम्मर दुखाईमा एक्सरे गर्दा हड्डी खिइएको देखियो, एमआरआई गर्दा नशा च्यापिएको पाइयो भयो मेरो हड्डी खिइयो, नशा च्यापियो यसका कारण समस्या उत्पन्न हुने भयो भन्ने भ्रम पाइएको छ । नशा च्यापिँदा वा हड्डी खिइँदैमा आँत्तिनु हुदैन । यस्तो समस्या हुदैमा प्यारालाइसिस् हुन्छ, शल्यक्रिया नै गर्नु पर्छ भन्ने कुरा भ्रममात्र हो । यस्तो गलत धारणा हुँदा पनि दुखाई बढी हुने गरेको छ ।
कम्मर दुखाइ हुँदैमा प्यारालाइसिस् हुदैन र शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि हुँदैन । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यमा मात्र हुने गर्छ । शल्यक्रिया गर्नु पूर्व धेरै उपचार प्रक्रिया छन्, जुन सफल भएमा शल्यक्रिया गर्न आवश्यक हँुदैन । त्यसैले साधारण कम्मर भन्दैमा पीर गर्नुपर्दैन । यो कुनै ठूलो समस्या होइन । यसलाई राम्रोसँग उपचार गरेमा निको पार्न सकिन्छ । तर के कारणले दुखेको हो यो भन्ने पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । कम्मर दुखाई बस्ने तरिका नमिले हुनुको साथै ट्यूमर, इन्फेक्सन, बाथ, चोटपटक जस्ता समस्याले पनि कम्मर दुखाइ हुने गर्छ । यदि दुखाई राति बढी हुन्छ भने, दुखाई सँगसँगै ज्वरो आए, खाना नरुचे, तौल घटे, हातखुट्टामा कमजोरी महसुस जस्ता समस्या देखिएमा तुरुन्तै विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा एक्सरे, एमआरआइको साथै सिटीस्क्यान समेत गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै, ग्यास्टिक, मिर्गौलामा पत्थरी, पित्त थैलीमा पत्थरी, आन्द्रामा समस्या देखिएमा पनि कम्मर दुखाइ हुने सम्भावना रहन्छ । कम्मर दुख्ने समस्याको कारण धेरै भएपनि ९५ प्रतिशत मानिसमा बसाइको तरिका नमिले हुने गर्छ ।
कम्मर दुखाइबाट बच्ने प्रमुख उपाय बस्ने तरिका मिलाउने हो । बस्दा भुँइमा थचक्क, टुक्रुक्क, पलेटी मारेर कम बस्ने गर्नुपर्छ । बस्ने समयमा जहिले पनि अगलो स्थानमा बस्नु पर्ने हुन्छ । बस्ने बेलामा जहिले पनि कम्मरभन्दा माथि घुँडा आउनु हुँदैन ।
त्यसैले बस्दा जहिले पनि घुँडा तल हुनुपर्छ । जसले गर्दा कम्मरमा कम चाप पर्न जान्छ । एउटै आसनमा धेरै समय बस्दा पनि समस्या हुने हुँदा लगातार लामो समयसम्म एउटै स्थानमा बसेर काम नगर्ने । लामो समयसम्म एउटै स्थानमा बसेर काम गर्नु परेमा केही समय हिँडडुृल गरेर बस्दा राम्रो हुन्छ । साथै नियमित रुपमा व्यायाम गनु उपयुक्त हुन्छ ।